Ndakawana sei kufarira Social Media? | Martech Zone
Ndakawana sei kufarira Social Media?
Mugovera, Nyamavhuvhu 18, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pakabvunzwa Shell kune vanhu vangangofarira kupa imwe mhinduro ne SAP Ongororo paSocial Media, Ndakasvetuka pamukana uye ndikamunyorera pakarepo. Nemvumo yaShel, akandibvumidza kuisa mhinduro dzangu pane yangu blog. Ichi Chikamu I!
Ndiudze iwe kuti wakatanga riini kufarira pasocial media uye sei. Sei?
Ndichishanda muPrint Media kweanopfuura makore gumi, ndakaona Internet ichikurumidza kutanga kukwezva meso, uye pamwe nayo, kushambadza kubva muindasitiri yemapepanhau. Iyo internet senge svikiro inowanikwa, isingadhuri, uye tekinoroji iri nyore nyore. Kunyangwe mukati mekudhinda midhiya, ini ndaigara ndichitenda kuti yega yega svikiro yaive nesimba rayo uye kusasimba. Dzimwe nguva Pepanhau anga asiri nzvimbo huru yekushambadzira.
Indaneti payakauya, vandaishanda navo vakaiona sekutyisidzira. Ndakauona semukana unoshamisa. Ndakasvetuka ngarava ndokuenda kuDenver, Colorado kunoshandira kambani yaitungamira mukushandisa Indaneti. Zvinosuruvarisa, ini ndakabatana apo iyo bubble yakanga ichiputika. Ndakaenda kuIndianapolis kujoina bepanhau repanzvimbo uye kutungamira kwavo kushambadzira, vachishandisa dhata kunongedza zviri nani vanotarisira kunyorera uye kusundira yakanangana nepositi chirongwa chevatengi.
Ndakaedza nepandaigona napo kuwana matekinoroji senge Email Kushambadzira mupepanhau futi, asi chero "Internet" yaionekwa senge svikiro rekuendesa zvirimo nekutengesa kushambadzira… kwete kugadzira hukama. Chero chipi zvacho cheInternet chaivewo pasi pechiremera cheDhipatimendi reIT saka ndanga ndichitsika zvigunwe zvevamwe vanhu. Pakapinda manejimendi nyowani ndokutanga kubvunza kuti, "Chii chaunoita?", Ndakaziva kuti vaive vasingazive uye ndaifanira kuenda.
Kubudikidza neshamwari uye wandinoshanda naye, Darrin Grey, ndakasangana naPat Coyle ndokujoina femu yavo, Brandirect. Darrin aive uye ari shasha pakutengesa uye network. Pat aive uye ari nyanzvi pakuvaka hukama. Ini ndaive dhata uye tekinoroji mukomana - kutsvaga akanakisa matekinoroji ekuwedzera hukama hwemakambani netarisiro yavo nevatengi. Kwakave kubudirira, Darrin akatengesa, Pat akatungamira, uye ini ndakavaka!
Paive panguva iyi apo ini naPat takatanga kuona kukanganisa kwaive neSocial Media. Kwete zvakanyanyisa, takaverenga (kudya) bhuku raShel, Kukurukurirana Wakashama. Isu takanzwisisa kuti kushambadzira kwaive kusisiri kungoita 'push' tekinoroji, yanga ichichinja kuita chimwe chinhu chakanyanya, chakasiyana kwazvo.
Pat akatamira kuThe Indianapolis Colts nguva yakazara. VaColts, vaitungamirwa naJim Irsay, vaiziva kuti vaive padanho rehukuru uye ndinotenda aive nechiratidzo chekuziva kuti aifanira kutora mukana wekubatana nevateveri apo kusundidzira kwake kuSuperbowl kwaive kunoonekwa.
Ndakaenda ku ExactTarget, Email Service Provider, inoshungurudzwa neevhangeri yeCMO uye muvambi Chris Baggott. Meseji yaChris yaive yezve kukosha kusinganzwisisike kwemvumo-based email kushambadzira, yakanangisa meseji chaiyo kune vanhu chaivo panguva chaiyo.
Mumakore maviri apfuura, Pat neni takaramba tiri shamwari dzepedyo uye tichisangana kazhinji nekirabhu yemubhuku yemuno yaanobatanidza, Iyo Indianapolis Book Mashup. Bhuku redu rekutanga? Kukurukurirana Wakashama Ehe saizvozvo!
Pat akatora mukana uyu kusundidzira maColts kuvaka social network yeSuperbowl Champions. Ndakamedzerera mate pandakaona MyColts.net ichiva chaicho. Nesangano rakabatikana rangu pachangu, kuvhura Yenharaunda Yekuvandudza yeExactTarget uye kukwidziridzwa kuita Chigadzirwa maneja weExpactTarget isu tichikura kubva kumazana evatengi vanobatanidzwa kusvika kuzviuru, ini ndaigona kungoona sekuvhurwa kweMyColts.net.
Chris Baggott neni takatangawo kusangana nekutaura nezve svikiro. Chris akanzwisisa kukosha kwesvikiro, iro (ini ndinotenda) raive nesimba rakakura mukufambisa ExactTarget kumberi kweindasitiri. Chris ' Email Yakanakisa Maitiro blog akapihwa kanoverengeka pamusoro pemakore uye ainyatso kuzivikanwa semutungamiri anofunga muindastiri yekutengesa yeemail - nekutenda muchikamu kublog rake. Apa ndipo pakatanga Chris kuona mukana, zvakadaro. Blogs dzaive dzakanaka mota yeruzivo - asi zvakadaro hazvisi nyore kumutengi kuti awane nugget yegoridhe iyo ma blogger aivatumira.
Chris akatanga kudyara mbeu ye Compendium Software, kutanga kwake kutsva. Ramba uine ziso pane ino kambani! Iko kushanduka kunotevera kwekublogi uye iko zvino kuri kuve kwechokwadi. Dzimwe nguva ndinonzwa sababa vanoona mwana wavo achikura sezvandinoona iyi kambani ichitanga - asi, zvinosuruvarisa, nguva yacho yanga isipo yekuti ndibatanidze timu.
Sei ndakabatwa muSocial Media?
Zvemagariro midhiya nhanho yekutamba munda. Ini ndinotenda yakakosha kune bhizinesi sezvazviri kune democracy. Zvemagariro midhiya zvinopa chero munhu ane keyboard uye internet kuwana kuti ave nezwi. Zvemagariro midhiya zvinopa nzira yemabhizinesi akanaka, akatendeseka ekuvaka hukama netarisiro yavo nevatengi. Haasisiri 'iye anogona kuwana kushambadza kwakanyanya' anokunda. Hapasisina mabhizinesi anofanirwa kubhadhara akakura zvikamu zvemabhajeti avo kudhinda nekuparadzira midhiya kuti iwanikwe. Iye zvino ivo vanongofanirwa kuita rakakura basa uye izwi rinobuda.
Ndeupi mushambadzi aisazoda kuve nechekuita neizvozvo?
Rutivi Rwechipiri: Makore gare gare, Iyo Indianapolis Star yakatanga kuona mwenje zvakare. Pane imwe nguva yakasekwa nevanyori vemapepanhau, izvozvi zvinogadzirwa nevashandisi zvave kuita nzvimbo inotungamira yekukura kwepepanhau. Buda IndyMoms semuenzaniso wakanaka.
Tags: douglas karrchaizvoindianapolis coltshurukuro dzisina kupfekaShel Israerievanhu vezvenhau
Nhau Dzakashata paDoug Kufambidzana Pamberi…
Zvemagariro Midhiya: SAP Global Survey (Chikamu II)
Aug 18, 2007 na9: 27 PM
Chinyorwa chikuru, Doug. Ini ndinobva kunodhindisa nyika futi. Ndakacheka mazino angu ndichidzidzira kutaipa paCompuWriter Jr. Chinhu chacho chaive netambo refu yefirimu ine font yakanyorwa yakamonerwa pavhiri mukati memuchina. Kamwe chete tsamba payakanyorwa, iwe waisakwanisa kudzokera shure nekugadzirisa. Iwe waifanirwa kutaipa tambo uye ruoko kuibvisa pamusoro pekukanganisa!
Ini ndakapeperetswa kure sezvo tekinoroji yakauya iyo yakaita kuti iyo yega mechina maitiro "auto-mashiripiti." Nekomputa uye purinda, nyika yakavhurwa mikana isingaperi, kusanganisira kugadzirisa mhando-o usati wadhindisa iro peji (fungidzira izvozvo).
Zvino kwakauya iyo Internet uye vanhu vakatanga kutaurirana nemumwe zvavasati vamboita. Ndiri kugara ndichishamiswa nekudzika uye hupamhi hwetarenda uye njere munyika. Ehe saizvozvo pane anotsemuka zvakare, asi ini ndinodzivirira yavo kodzero yekujoinha hurukuro. Zvinonakidza kurarama panguva yeshanduko yechokwadi.
Aug 18, 2007 na9: 51 PM
Kwakanakisa! Ini handina kuziva kuti iwe wakabva kudhinda futi! Ini ndaive nemagetsi / zvemagetsi kumashure uye ndakashanda parutivi rwechihedheni chebhizimusi zvishoma saka ndinoziva kwauri kubva. Ini ndaivepo patakatanga pagination uye otomatiki kubva pakucheka nekunamatira peji inovaka!
Yako indasitiri inonakidza futi iyo yakatemerwa tekinoroji. Ini ndinofunga niche chitoro inguva yemberi yekutengesa uye, kunyangwe yakasimba nhasi, handifunge kuti iyo "Super Chitoro" ichagara mamwe makore gumi (zvirinani handitarisi kwete).
Maitiro imi vanhu amuri kushandisa tekinoroji pa Shiri Dzesango Dzisingagumi zvinonakidza. Vako franchisees vane rombo vanhu kuti vave newe!
Aug 19, 2007 pa 4: 38 AM
Chinyorwa chinonakidza kwazvo pasocial media!. Ini ndinobva kuSun Microsystems uye wangu CEO zvakare anokurudzira huzivi hwemagariro enhau. Ini ndakanyora nezveChris Anderson's Long Tail in
Aug 19, 2007 pa 7: 42 AM
Pandinoita masemina pa Corporate Blogging uye maCorporation ano'zviita nemazvo ', yekutanga kambani yandinotaura ndeye Sun naJonathon Schwartz!
Ndakaverenga yako blog munguva yakapfuura! Uri kuita basa rakanaka uye uine anonakidza maonero ekuti tekinoroji iri kuchinja nekushandura hupenyu hwedu.
Aug 19, 2007 na10: 42 PM
Ndiani kana chii Shel?
Aug 20, 2007 pa 7: 35 AM
Shel ndiye Shel Israel, munyori weNaked Nhaurirano - bhuku randinokurudzira zvikuru. Shel ine yakakura Blog izvo zvinoramba zvichiongorora nekukurukura Social Media.
Uye iye murume akanaka chaizvo! Iye anoshamisa akajeka, akavhurika, akatendeseka uye anowanikwa kuburikidza neyake saiti. Ini ndinofunga ndiye mumwe wevanyori vekutanga kunyatsoisa hunyanzvi hwake kushandisa blogosphere!
Zvita 28, 2007 na9: 34 PM
Masocial media saiti ndiyo nyowani uye inouya nzira yekushambadzira, ndinotenda. Zvinoshamisa kwandiri kuti Internet yakashanduka sei pamusoro pemakore uye ini ndinongoshamisika kuti chii chiri kuuya mune ramangwana. Chero chero mushambadzi mushambadzi uyo asingashandise enhau enhau ari kurasikirwa nemukana mukuru wekuwedzera bhizinesi.
Jul 2, 2015 pa 11: 51 AM
Saka iwe urikuti kutaurirana kwevatengi ndicho chikonzero chikuru social media yakanyanya kukosha? Iwe unofunga kuti mabloggi ane iwo mukana mumwe chete kana kuti ivo vanoisa munyori pane imwe ndege yakakwira kupfuura vateereri?
Jul 2, 2015 na2: 42 PM
Iko kugona kupa kukosha uye kuvaka chiremera pane blog ... wozogovana uye nekuikurudzira kuburikidza nesocial media isangano rakakura. Zvemagariro midhiya zvinonongedzera, zvichikugonesa kuve nehurukuro nevateereri kana kutokugonesa kuvaka yako nharaunda. Handina chokwadi chekuti ingave ine simba pasina imwe.